Bulshada Wadahadalka - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
Skip to navigation hoose
Codka Shaqaalaha Galmada VIC
Mashruuc ka socda Xarunta Michael Kirby ee Jaamacadda Monash University Melbourne
Fiona Patten Video
Ku Saabsan Qaanuunka
Raadi website this
You are here: Bogga ugu weyn / Bulshada Wadahadalka
Ku saabsan bulshadayada kulamada wada hadalka
Bulshada Taariikhda Wadahadalka
Bulshada Faahfaahin Mawduucyada Wadahadalka
Shuruucda iyo Xeerarkiisa
Ragga ka shaqeeya ragga iyo dumarka
Codadka Jinsiga ee Wadada ku saleysan Wadada
Shaqaalaha Jinsiga Soogalootiga
Talooyinka kama dambeysta ah
RSVP ee Jaaliyadaha Kulamada Wada hadalka
Wadahadalka waxaa loogu talagalay shaqaalaha galmada kaliya. Waxaa soo bandhigi doona hal ama laba marti-geliye kuwaas oo bixin doona waxoogaa taariikh ah oo ku saabsan dib-u-eegista iyo sida wadahadalku u socon doono. Wadahadal kastaa wuxuu kujiraa khabiir ku takhasusay aaga gaarka ah. Waqtiga intiisa badan wuxuu noqon doonaa dood iyo su'aalo ku saabsan mowduuca.
Waxaan ixtiraameynaa asturnaanta shaqaalaha galmada: ka qeybqaadashada. Uma baahnid inaad isticmaasho magacaaga dhabta ah ama muujinta wejigaaga. Bartilmaameedka ayaa ah koonto Zoom-ga si buuxda loo ilaaliyo kulamada lama diiwaangelin doono. Xoghayuhu wuxuu qaadan doonaa qoraalo kadibna wuu quudin doonaa dhamaadka, isagoo rajeynaya qoraallo talooyin ah oo ku saabsan Dib-u-fiirinta ka soo baxday wadahadalka.
Kulamadaani waa inay labaduba su’aalo weeydiiyaan oo ay ra'yi ka dhiibtaan. Uma baahnid aqoon gaar ah aag kasta si aad uga qeybqaadato - waxaad khabiir ku tahay noloshaada shaqada. Ujeedada wada hadaladaani waa adiga inaad ogaato wax badan oo ku saabsan dib u eegista, iyo anaga oo aan baranayno sida ay dib-u-eegistu u caawin karto oo ay ula socodsiin karto baahiyaha kooxaha gaarka ah ee shaqaalaha galmada.
Kaqaybqaadashada nidaamka dibuhabaynta sharciga shaqada galmada Victoria gudaheeda waxaa dhib ku ah kakanaanta sharciga iyo xeerarka shaqada galmada. Waxaan ku soo koobnay waraaqdan inay tahay macluumaad asal ah oo ku saabsan shaqaalaha galmada iyo xulafadooda ee doonaya inay ku muujiyaan aragtidooda ku saabsan Dib-u-eegista 2020 ee Xakamaynta Shaqada Galmada.
Ma aha inaan ogolaano. Khilaafaadka ixtiraamka ma ahan wax dhibaato ku ah howshan maxaa yeelay waxaa jira qaabab dhowr ah oo shaqaalaha galmada ay fikirkooda ka dhiibtaan. In kasta oo Dib-u-eegistu aysan ahayn martiqaadka soo gudbinta dadweynaha, waxaad si toos ah warqad ugu qori kartaa Fiona Patten oo sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ka maqasho shaqaalaha galmada wax kasta oo ku habboon. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad codkaaga ugu dari karto mid ka mid ah dhowr meelood oo ay soo gudbiso bulshada. Mashruucyada Galmoodka ee Voices Victoria Project waxay horumarinayaan soo gudbinta Xarunta Kirby Center iyadoo kooxo ay ka mid yihiin Vixen, Reform Work Reform Victoria, Red Files Inc., iyo Man Work.
Juun 29th - Shuruucda & Xeerarka
Luulyo 1 - Arrimaha Caafimaadka
3da Luulyo - Shaqaalaha Galmada ee Labka ah
Julaay 3rd - Codadka Shaqaalaha Shaqaalaha Galmada
Luulyo 7th - Shaqaalaha Galmada Muhaajiriinta
Luulyo 10 - Talooyinka Ugu Dambeeya
Taariikh: 2 pm - 3.30:29 pm, Isniinta XNUMX-ka Juun
Fududeeye: Estelle Lucas
Karraaniga: Bebe Loff
Go'aaminta shaqada galmada waa ka saarista sharciyada dambiyada ee ka dhanka ah dadka waaweyn ee bixiya iyo iibsashada adeegyada galmada iyo ka ganacsiga ganacsiga galmada. Iyaga oo meesha ka saaraysa shaqaalaha jinsiga ee sharciga galmood la aanta ah waxay awoodi doonaan inay ka faa iideystaan ​​xeerarka wax ku oolka ah ee quseeya ganacsiyada kale ee sharciga ah iyo adeeg bixiyaasha. Si kastaba ha noqotee, ku habboonaynta dhammaan qaybaha kala duwan ee warshadaha galmada qaab dhismeedka 'qawaaniinta iyo heerarka khuseeya ganacsiyada la midka ah iyo bixiyeyaasha adeegga' sidaa darteed runtii waxay ka faa'iideystaan ​​dhammaan shaqaalaha galmada si toos ah maahan.
Xeerarka adag ee ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo ganacsi oo sharci ah waxaa loo yaqaan 'cajalad cas' sabab wanaagsan. In iyaga laga dhigo kuwo ku habboon, cadaalad ah oo u nugul shaqaalaha galmoodka baahiyaha gaarka ah ee gaarka ah iyo badbaadada ayaa ah caqabad. Qawaaniin noocee ah ayaa ka dhigi kara goobo shaqo oo nabdoon isla markaana ay suurtogal u tahay shaqaalaha galmada - kuwa daboolaya timajarayaasha ama kuwa madadaalada ama daaweeyayaasha duugista ah? Miyay tahay in dhillayaasha loola dhaqmo sidii jimicsi, ama qolalka tattoo ama guryaha hoyga ah? Maxay ka dhigan yihiin xulashooyinka kala duwan? Sideen ula macaamilnaa xaqiiqda ah in qaabdhismeedka qaabdhismeedka casriga ahi u baahan yahay adeeg bixiyaha ama meheradda inay helaan shahaadooyin iyo diiwaangelinno kala duwan, oo had iyo jeer ay ku jiraan bixinta magacyadooda.
Kala-sooca ayaa sidoo kale yaraynaysa dhaleeceynta waxayna u sahleysaa shaqaalaha ka shaqeeya galmada inay ku dadaalaan isla xuquuqda ay la mid yihiin kuwa kale ee reer Fiktooriya ee ku wajahan caddaaladda, dheefaha samafalka, xuquuqaha dhaqaale iyo kahortaga rabshadda iyo takoorka. Mar labaad, kani maahan mid toos ah. Sharciyo kala duwan iyo siyaasado ayaa u baahan in la beddelo si arrimahaas loo sameeyo kuwo run ah.
Kulan habboon oo loogu talagalay shaqaalaha galmada gaarka loo leeyahay ee rajeynaya inay ka shaqeeyaan guriga
Adeegyada turjumaanka waa la heli karaa (fadlan la xiriir)
Uma baahnid aqoon hore oo sharciga ah inaad ku tabarucdo
Qaab-dhismeedka qaabka aqoon-isweydaarsiga oo leh qaab wada-hadal miis wareega ah
Waxaa lagu qabtaa khadka tooska ah halkaad qarsoodi ku noqon karto
Waad dhageysan kartaa oo keliya haddii aad rabto
Taariikh: 2 pm - 3.30:1 galabnimo, Arbacada XNUMX-da Luulyo
Fududeeye: Gabby Skelsey
Kulankaan waxaa loogu talagalay shaqaalaha galmo ee Fiktooriya oo keliya, ama kuwa booqda Victoria. Waa maxay waxyaabaha aad ka welwelsan tahay ee ku saabsan sida loo maareeyo caafimaadka iyo ladnaanta arrimaha caafimaadka shaqaalaha galmada? Waxaan ka wada hadli doonnaa arrimaha ku saabsan caafimaadka galmada oo ay ku jiraan adeegyada, baaritaanka khasabka ah ee STI iyo sharciga HIV. Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonnaa arrimaha kale ee caafimaadka shaqada iyo badbaadada oo ay ku jiraan rabshadaha. Waxaan rabnaa inaan sameysano farriimo cad oo ku saabsan sida goobta shaqada ee badbaadsan ay umuuqato shaqaalaha galmada waxaanna soo aruurineynaa fikrado la taaban karo oo ku saabsan waxa xeerarka iyo siyaasadaha lagu gaari karo taas. Gabby Skelsey oo ka socda RhED (Xarunta Caafimaadka iyo Waxbarshada loogu talagalay Shaqaalaha Jinsiga) ayaa fududeyn doona wadahadalkan.
Uma baahnid aqoon gaar ah oo ku saabsan arrimaha caafimaadka si aad gacan uga geysato
Taariikhda: 2 pm - 3.30:3 galabnimo, Jimcaha XNUMX-da Luulyo
Fududeeyaha: Jessie Lewis
Karraaniga: Dean Lim ka Nin shaqeeya
Kulankaan waxaa loogu talagalay ragga ka shaqeeya, ama ka shaqeeyey, warshadaha galmada ee Fiktooriya. Shaqaalaha galmada ragga waxay la kulmaan arrimo gaar ah oo iyaga u gaar ah oo aan had iyo jeer si wanaagsan loogu mataleynin meelaha u doodista. Noosheeg isbeddelada, sharciga ama haddii kale, waxaad dooneysaa inaad aragto. Wadahadalka ayaa loo habeeyay iyada oo lala kaashanayo Nin shaqeeya, U-qareemeynta Victoria ee m2m iyo kooxda taageerada.
Uma baahnid aqoon gaar ah oo aad ku tabarucdo
Taariikhda: 6 pm-7.30 pm Jimcaha 3-da Luulyo
Goobta: 31 Gray Street St Kilda
Fududeeye: Cheryl Overs
Karraaniga: Estelle Lucas
Kulankaan fududeeyey ee goobta waxaa loogu talagalay dadka shaqeeya, ama ka shaqeeyey, saldhigyada ku saleysan saldhigga. Waxaan rabnaa inaan sameysano farriimo cad oo ku saabsan sida hab amaan ah ee looga shaqeeyo meelaha banaanka ay umuuqato shaqaalaha galmada. Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonnaa arrimaha kale ee caafimaadka shaqada iyo badbaadada oo ay ku jiraan rabshadaha. Cheryl Overs ayaa fududeyn doonta wadahadalkan.
Kulan ku habboon dadka ka shaqeeya dariiqyada waddooyinka
Waxaa lagu qabtay goobta
Taariikh: 2 pm - 3.30:7 galabnimo, Talaadada XNUMXda Luulyo
Fududeeyaha: Jessie Lu-Lee iyo Gabby Skelsey (RhED)
Kulankaan waxaa loogu talagalay shaqaalaha galmada ee ka shaqeeya, ama ka shaqeeyey, Fiktooriya dhexdeeda. Shaqaalaha muhaajiriinta ah waxay la kulmaan arrimo gaar ah oo ay ku murmi karaan arrimo gaar ah sida luqadda, dhaleeceynta iyo shuruudaha fiisaha. Waxaan rabnaa inaan maqalno sida wax u wanaajin karaan shaqaalaha muhaajiriinta marka ay timaado nidaaminta shaqada galmo. Shaqaalaha soogalootiga had iyo jeer si fiican ugama dhex muuqan meelaha u dooda. Waa tan fursaddaada aad fikirkaaga dhiibatid. Wadahadalkan waxaa fududayn doona Jessie Lu-Lee (Ingiriis, Cantonese, Mandarin).
Adeeg turjubaan ayaa la heli doonaa (fadlan la xiriir)
Taariikhda: 2 pm - 3.30:10 galabnimo, Jimcaha XNUMX-ka Luulyo
Casharkaan wuxuu sii xoojin doonaa dhamaan talooyinka iyo natiijooyinka kalfadhiyadii hore ee kooxda Voices Workers 'Voices team. Wadahadalkaasi wuxuu dib u celin doonaa natiijooyinkayagii ugu dambeeyay isla markaana wuxuu hubin doonaa in si taxaddar leh loogu dhawaaqo oo loo caddeeyo si ay si sax ah ugu matalaan shaqaalaha galmada ee ka qayb qaatay dooddeena. Talooyinka ugu dambeeya waxay noqon doonaan luuqad rasmi ah laakiin kalfadhigan waxaan hubin doonnaa inay qabtaan nuxurka baahiyaha shaqaalaha galmada. Cheryl Overs ayaa fududayn doonta kulankan.
Kulan ku habboon dadka waqtiga liita oo jecel inay bartaan
Magaca la doorbiday
Geli Email Xaqiiji Email
Waxaan u baahanahay cinwaan e-mayl ah si aan kuugu soo dirno iskuxirka zoom
Waa kuwee Jaaliyadaha Kulamada Wadahadalka aad jeclaan lahayd RSVP?*
Shuruucda & Xeerarka
Ma u baahan doontaa turjubaan?
Luqadee (yadee) ayaad ugu baahan doontaa turjubaan?
Nagala Soco / Soo Dhawo
Codadka Shaqaalaha Galmada VIC waa mashruuc ka yimid Xarunta dhexe ee Michael Kirby ee Jaamacadda Monash Melbourne
Xuquuqda daabacaadda © 2021 · Codadka Shaqaalaha Galmada VIC